By सपनासंसार September 06, 2009
राजु लामिछाने (जुदने)
मन भरी शंका पाल्छ,
पाईलै पिच्छे तगारो हाल्छ,
न अगाडि सर्छ, न अरुलाई सर्न दिन्छ, यो दुनिया।
बलेको आगो ताप्छ,
हुने खानेलाई काखी च्याप्छ,
निर्धोलाई न बाँच्न दिन्छ, न मर्न दिन्छ, यो दुनिया।।
कसैको खुशीको क्षण,
उसलाई शुभकामना दिएर,
आफ्नो मन धमिलो बनाउन सक्छ, यो दुनिया।
कसैको दुःखको क्षण,
उसलाई समबेदना दिएर,
मन मनै खुशियाली मनाउन सक्छ, यो दुनिया।।
न दया माया छ,
न त यसमा विबेक छ,
जता फाईदा हुन्छ उतै लाग्छ, यो दुनिया।
नपाए वास्तै गर्दैन,
पाए जय जय भन्छ,
हेर्नुस न कस्तो नकचरो छ, यो दुनिया।।
झुटलाई सत्य, सत्यलाई झुटमा बदलेर
रातोलाई सेतो भन्नु परेको छ।
कहिं खुट्टा खोच्चाउँदै त कहिँ आँखा बन्द गरेर
दुनियासँग दोस्ती गर्नु परेको छ।।
कबिता राजुको कलम
Labels: कबिता राजुको कलम
Anonymous 9/6/09, 9:30 PM
IT'S TRUE, NICE ONE!!!
Anonymous 9/7/09, 8:28 AM
यस्तै छ दुनियाँ, नभइ पनि हुन्न, भएर पनि हुन्न। निकै राम्रो कबिता छ। यो तलको पङ्ती चाँही सार्है मन पर्‍यो मलाई। कती सम्म स्वार्थी र निच छ त दुनियाँ यो पङ्ती बाट प्रस्ट हुन्छ।
कलम चल्दै गरोस दाई! शुभकामना!
Anonymous 9/13/09, 12:13 PM
Anonymous 9/16/09, 4:59 AM
I like like!!